अर्को चरणको कोरोनाका लागि तयारी खोई? :: Setopati
अर्को चरणको कोरोनाका लागि तयारी खोई?
बाल गोपाल देवकोटा चैत २३
विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसको दोस्रो र तेस्रो लहरहरु चलिरहेको बेला छिमेकी देश भारतमा भने कोरोनाको दोस्रो लहर देखिसकेको छ।
हाम्रो देश नेपालमा पनि कोरोनाको दोस्रो लहर देख्न नसकिएला भन्न सक्ने स्थिति छैन। छिमेकी मुलुकहरुमा नै कोरोनाको दोस्रो लहरले उग्र छलाङ मारिरहेको बेला नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति नआउला भन्न सकिंदैन।
विकसित मुलुकहरुले कोरोना रोक्न सकेका छैनन् भने हाम्रो देशमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर चल्यो भने के हालत होला भन्ने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन।
छिमेकी मुलुकबाट केही सिकेर अहिलेबाट नै सचेत हुन जरुरी छ ताकि हामीले भविष्यमा पछुताउनु नपरोस्। अहिलेको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपालले दोस्रो र तेस्रो लहरको कोरोनाको लागि केही पनि तयारी नगरेको देखिन्छ।
यस्तै रहिरहने हो भने अबको एक-दुई महिनामै नेपालमा कोरोनाको बिगबिगी बढ्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारले अहिले एउटा सूचना निकालेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने पटक्कै भएको देखिँदैन। त्यही एउटा सूचनाको भरमा नेपाल सरकार ढुक्क छ कि कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर नेपालमा देखिने छैन।
नेपाल सरकार एउटा सूचनाको भरमा कोरोना फैलिंदैन भन्दै ढुक्कका साथ पन्छिन खोजिरहेको छ।
नेपाल सरकारले अब पनि केही गृहकार्य नगरी चुपचाप बस्यो भने नेपालको अवस्था स्पेन, इटाली, अमेरिका जस्तो बन्न केहीबेर पनि लाग्ने छैन। समय छँदै कोरोनाबाट हुनसक्ने नोक्सानीबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू खोज्न सक्नुपर्छ, कार्यविधि बनाउनुपर्छ र त्यसको पालना पनि गराउन सक्नुपर्छ।
कोरोना भाइरसले हाम्रो समाजका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा विविध नकरात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। केही प्रभाव भइसकेका छन्।
त्यसैले कोरोनाको रोकथाम र यसले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनमा पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न हाम्रा सबै सार्वजनिक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र, तिनमा कार्यरत कर्मचारी र सबै सचेत नागरिकहरुले आ-आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व गम्भीरतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।
युवा-युवतीहरुले कोरोना भाइरसलाई अलि बढी नजरअन्दाज गरेजस्तो देखिन्छ। तर युवा-युवतीहरुले यस्तै बेफिक्री चाल देखाउने हो भने कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सार्न मुख्य सम्वाहक बन्ने जोखिम यही समूहमा उच्च देखिन्छ।
दक्षिणी नाका छेउछाउ बस्ने जनसंख्या यसको उच्च जोखिममा देखिएको छ। त्यतातिर पनि हाम्रो पर्याप्त ध्यान नगएको हो कि?
हामीले चीन र इटालीकै दृटान्तलाई लिने हो भने पनि चीनमा कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रका जनताले लकडाउनलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वका रुपमा लिँदै त्यसलाई निर्ममतापूर्वक पालना गरे भने इटालीका कोरोना भाइरस प्रभावित क्षेत्रका जनताले गैरजिम्मेवार हुँदै पर्याप्त सावधानी अपनाउनतिर लागेनन्।
त्यसैले समय छँदै भइपरी (भविष्यमा) आउने समस्यासँग जुध्न तयार भएर बसौँ। समय छँदै समस्याको बाटो नखोजेपछि नेपालको हालत पनि स्पेन, इटाली र अमेरिका जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले आजैबाट भइपरि आउने समस्याको समाधान खोज्न तिर लागौँ।
अन्तत: भिडभाडमा नजाउँ, माक्स लगाउँ, साबुन पानी वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। बिना कुनै काम घरबाहिर ननिस्कौँ। कोरोनाबाट आफू बचौँ, अरुलाई बचाऔँ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २३, २०७७, १५:२४:०५